अफगानिस्तानमा तालिबान शासन फर्कियो, मुल्लाह र हिबातुल्लाहमध्ये कसले सम्हाल्लान् सत्ता? - Dainik Online Dainik Online
अफगानिस्तानमा तालिबान शासन फर्कियो, मुल्लाह र हिबातुल्लाहमध्ये कसले सम्हाल्लान् सत्ता?
प्रकाशित मिति : ३२ श्रावण २०७८, सोमबार १० : ३३
आइतबार राष्ट्रपति असरफ गनीले देश सुटुक्क छाडेर भागेपछि तालिबानले पुरै देश आफ्नो हातमा लिइसकेको छ। उनीहरु राष्ट्रपति भवनमा बन्दुकसहित घुसेका छन्।
गनीको बहिर्गमनसँगै तालिबानले चाँडै सरकार संचालनबो जानकारी दिने बताएका छन्। तालिबानले सरकारसँग मात्र तालिबानको विवाद भएकाले देशका कसैमाथि बदलाको भावन भएको उल्लेख गरेको छ। सर्वसाधारणको सुरक्षाको ग्यारेन्टी आफूले लिने बताउँदै तालिबानले उनीहरुको सम्पत्ति उनीहरुकै भएको र त्यो कसैले नखोस्ने जनाएको छ।
अब यतिबेला तालिबानको कुन नेताले सत्ता सञ्चालनको नेतृत्व गर्नेछन् भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। बीबीसीका अनुसार यो प्रश्नको जबाफ खोज्दा धेरै चर्चा हिबातुल्लाह अखुन्दजादा र मुल्लाह अब्दुल गनी बरादरको भइरहेको छ।
यी दुई को हुन्, तालिबानभित्र यिनको भूमिका तथा यिनको व्यक्तित्व कस्तो छ?
इन्टरपोलका अनुसार मुल्लाह बरादरको जन्म उरुजगान प्रान्तमा सन् १९६८ मा भएको थियो। उनी दुर्रानी समुदायका भएका ठानिन्छ। हिबातुल्लाह अखुन्दजादा
मन्सुरले आफ्नो इच्छापत्रमा हिबातुल्लाहलाई आफ्नो उत्तराधिकारी घोषित गरेका थिए। करिब ६० वर्षका हिबातुल्लाहले जीवनको धेरै समय अफगानिस्तानमै बिताएका छन्। हिबातुल्लाहको नामको अर्थ हुन्छ, ‘अल्लाहको तर्फबाट प्राप्त उपहार।’ उनी नुरजाई समुदायबाट आएका हुन्।
अफगान राष्ट्रपति कार्यलयमा तालिबान
अन्य तालिबान नेता को को छन्?
तालिबानको एउटा नेतृत्व परिषदपनि रहेको छ। २६ सदस्य रहेको रहबारी शुरालाई तालिबानको उच्चतम सल्लाहकार परिषद् तथा निर्णायक समूह मानिन्छ। बीबीसी